Momba anay - Angel Garment Accessories Co., Ltd.
Angel Garment Accessories Co., Ltd.dia famokarana matihanina amin'ny fanaovana crocheting, sokajy roa tsy mihidy; Pita malefaka malefaka, tsy matevina, ary karazan'entana manodidina ny arivo amin'ny famokarana orinasam-pandraharahana teknolojia avo lenta. Efa nanolo-tena amin'ny fitafiana ambongadiny fitafiana sy ny karazana famolavolana, fampandrosoana, famokarana ary varotra. Ny orinasanay dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa, toy ny fandokoana, vokatra vita amin'ny kofehy miaraka amin'ny fanoherana hazavana, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny rano, fanoherana ny fitafiana, tsy manjavona ary toetra hafa, ireo vokatra dia be mpampiasa amin'ny akanjo, kiraro, satroka, kitapo, kilalao, fiara, asa-tanana, fitaovana fitsaboana ary indostria hafa ho fitaovana fanampiana. Ny orinasanay dia natsangana tamin'ny taona 2010, miorina eo an-tanàna manerantany malaza orinasa mpamorona - Dongguan. Miaraka amin'ny ezaky ny mpikambana rehetra ao amin'ny orinasanay, ny Angel Garment Accessories dia nanjary iray amin'ireo mpamatsy fividianana fitafiana tena tsara ao an-trano sy any ivelany.
Ny orinasanay hatrizay niorenany, "iraka ho lasa sarobidy, mamorona lanja" toy ny hevitra fitantanana ny orinasa, manaraka ny "matihanina, manolo-tena, manatsara hatrany, mahomby, haingana, mpanjifa" filôzôfia orinasa voalohany sy "fitantanana siantifika, famokarana fiarovana. ; avo lenta, fahafaham-po ny mpanjifa "ny politikam-kalitao, ankehitriny ny orinasan'ny orinasanay ankoatra ny tsena anatiny dia manana fampandrosoana marin-toerana, dia nahazo isa ihany koa tamin'ny firenena maro nanerantany. Tao anatin'izay dimy taona lasa izay, ny orinasa manana vokatra avo lenta sy modely orinasa tonga lafatra, ny fandrosoana dia fampandrosoana haingana, ao amin'ny indostrian'ny fitafiana fitafiana no nibahana toerana lehibe.
Fampiharana vokatra: ampiasaina amin'ny akanjo, fitsaboana, fanatanjahan-tena, dihy, kitapo, kiraro, satroka ary indostria hafa
Ny mari-pahaizana: SGS, Oeko-Tex
Ny orinasa dia nanolotra fitaovana maherin'ny 100 ho an'ny tontolon'ny lamba manerantany, toy ny milina fanenomana haingam-pandeha haingam-pandeha, milina fanenomana kofehy jacquard solosaina, milina fanontana famindrana multi-function, milina fanontana nomerika, milina fanapahana laser an'ny marika voatenona, milina marika marika fanenomana Soisa, milina fanontam-pirinty Heidelberg sns
Ny vokatra dia amidy any amin'ny tsena eropeana sy amerikanina ary ozinina mpivarotra varotra ivelany. Milamina ny kalitao ary miakatra hatrany ny habetsaky ny varotra. Ankehitriny dia mahatratra 3 tapitrisa ny vola isam-bolana.
Hamarino tsara ny biraon'ny sampana sy ny mpanjifa alohan'ny varotra, araho akaiky ny fivoaran'ny vokatra mandritra ny varotra, mifehy ny kalitaon'ny vokatra, manaova asa tsara amin'ny fanaraha-maso kalitao, ary araho ara-potoana ny fampiasana ny mpanjifa sy ny traikefa aorian'ny fivarotana.